မိဘရှိတုန်းပြုစုပါ | Danya Wadi
Posted by danyawadi on April 16, 2018 in ဆောင်းပါးများ
ကောင်းလွန်းအားကြီးလို့ မျှဝေပေး လိုက်ပါ တယ်။ ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ။
“အမေ သား မနက်ဖြန် ဘွဲ့ ယူရမှာနော်…”
“အမေ သိပါတယ်သားရယ်… အဲ့ဒါကြောင့် လမ်းထိပ်က ဒေါ်ကျော့ ဆီမှာတောင် အမေ အင်္ကျီ င်္အပ်ထား ပါသေးတယ်…အမေ့ မှာ အင်္ကျီ အသစ်မရှိတော့ဘူးလေ…”
“ဟင်..အမေ ကလိုက်မလို့ လား… အိမ်မှာ အဖေ့ကိုစောင့်ဖို့ လူမရှိဘဲဖြစ်မှာပေ့ါ…. “
” သားအဖေက သက်သာနေပါပြီသားရယ်… ၀ှီးချဲ လေးနဲ့ ခေါ်သွားရင်ရပါတယ်….”
သား ဖြစ်သူစိတ် ညစ်သွားတယ်… ဒီလိုပွဲမျိုးကိုသူ့ မိဘတွေကို မခေါ်ချင်လို့ တော့မဟုတ်ပါဘူး…. ဈေးထဲမှာ ကြက်သားရောင်းပြီး စကားပြောရင် အော်ကျယ်အော်ကျယ် ပြောတတ်တဲ့အမေ နဲ့လေဖြတ်ပြီးလို့ နလန် ထူခါစ အဖေကို သူဒီလိုပွဲမျိုးကို ပွဲမထုတ်ချင်…
ဒါနဲ့ ဘဲ…မျက်နှာပျက်ပျက်နဲ့ သူ့ အမေ ကိုပြောလိုက်တယ်..
“မလိုက်ပါနဲ့ အမေရာ…ခန်းမထဲကို ၀ှီးချဲ လည်းဝင်လို့ ရတာမဟုတ်ဘူး..
အမေတို့ လိုက်လာလို့ လည်း ဘာမှထူးခြားသွားမှာမှမဟုတ်တာ…
မိခင် ဖြစ်သူမှာ သားရဲ့ တဇွတ်ထိုးဆန်တဲ့ စိတ်ကိုသိလို့နာကျင်မိတဲ့ စိတ်ထဲက ဒဏ်ရာကို မျက်နှာပေါ်က အပြုံးနဲ့ ဖုံးပြီး..
“အေးပါကွယ်…သားလေးသဘောပါ…သားလေး ဘွဲ့ ရရင်ဘဲအမေတို့ ကျေနပ်ပါတယ်… အမေ အိမ်မှာဘဲ သားအဖေကို စောင့်နေလိုက်ပါ့မယ်…”
သား ဖြစ်သူလည်း ကျေနပ်ပြီး အိပ်ရာ စောစောဝင် ခဲ့တယ်….
မိခင် ဖြစ်သူမှာတော့ အိပ်ရာပေါ်မှာ အိပ်ပျော်နေတဲ့ယောက်ျားကိုကြည့်ပြီးမချိပြုံးလေးပြုံး ခဲ့ရတယ်…
မနက်မိုးလင်းတော့ သားလေး စားဖို့ မိခင် ဖြစ်သူက မနက်စာကို အရင်ကထက်ပို ဂရုစိုက်ပြင်ပေးထားတယ်… ဘွဲ့ သွားယူမှာဆိုတော့ ဗိုက်နာမယ့်အစားအစာတွေ မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်လို့ ပေ့ါ….
“မစားတော့ဘူးအမေ သားသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကျောင်းနားက စားသောက်ဆိုင်မှာ ချိန်းထားတယ်… အဲ့ မှာဘဲစားတော့မယ်… “
“အေ်ာ… အင်းပါ သားရယ်.. သားလေး ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ခဲ့နော်..
မေမေတို့ ပြန်ကြည့်ချင်လို့ …”
“ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ.. သွားပြီနော်…”
ဒီလိုနဲ့ သားဖြစ်သူက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချိန်ထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ရောက်တော့ လူတောင်တော်တေ်ာစုံနေပြီ …နာရီကိုကြည့်တော့လည်း ဘွဲ့ ယူဖို့ အချိန်ကတစ်နာရီလောက်လိုသေးတယ် ဆိုတော့ မနက်စာစားဖို့ မှာ လိုက်တယ်…
သူငယ်ချင်းဖြစ်သူတွေကိုကြည့်တော့ တစ်ယောက်ထဲလာတဲ့ သူနဲ့ မိဘ ခေါ်လာတဲ့ သူနဲ့ ပေ့ါ…အဲ့ အချိန်မှာ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူ့ အမေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတယ်..
” ဟေ့ကောင်..ဒါငါ့အမေလေ ငါဘွဲ့ ယူတာ လိုက်လာခဲ့ ပေးတာ…
အမေ ဒါက သားသူငယ်ချင်းပါ…”
မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းအမေကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တော့ အဒေါ်ကလည်း ပြန်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တယ်.. ဒါပေမယ့် ညာဘက်လက်နဲ့ တော့မဟုတ်ဘူး ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ ဆိုတော့ကောင်လေး မှာ ထူးဆန်းပြီး ညာဘက် လက်ကို ကြည့်လိုက်မိတယ်…
“ဟင်… အဒေါ့်လက်မှာ ပတ်တီး နဲ့ ပါလား ဘယ်လိုဖြစ်တာလည်း…”
ဒါနဲ့ ကောင်လေး သူငယ်ချင်းက ၀င်ဖြေတယ်…
“ဒီလိုကွ…ငါ့အမေ က ဈေးထဲမှာ ငါးရောင်းတာ…အဲ့ ဒါမနေ့ က၀ယ်တဲ့ သူကို
ငါးကိုင်ပေးတာလေ လက်ကို ဓားထိသွားတာ….အဲ့ ဒီ့ဒဏ်ရာနဲ့ ညက အဖျားတွေ တက်လို့ ကွာ..ငါ့မှာစိတ်ပူလိုက်တာ..ဒီမနက်မှ ပြန်ကောင်းလာတာ….
ငါ့ကိုခုလိ ဘွဲ့ ခန်းမထဲရောက်အောင်ငါ့အမေ ကဈေးထဲမှာငါးေ၇ာင်းပြီး ကျောင်းထားခဲ့ တာကွ….ဒါနဲ့ မင်းအမေနဲ့ အဖေ ရောမတွေ့ ပါလား…”
ကောင်လေး မှာ သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ စကားတွေကို ကြားပြီး နောင်တတွေ များစွာနဲ့ …
“အော်…အင်း နောက်…နောက်မှာ လိုက်လာတယ်ကွ…. ငါ့ကိုခဏ ခွင့်ပြူပါဥိးကွာ … မင်းတို့ ဘွဲ့ ခန်းမကဘဲစောင့်နော်…”
စကားလည်းဆုံး ကားလမ်းမကို ထွက်ပြီး Taxi တစ်စီးငှားပြီး အိမ်ပြန်ခဲ့ တယ်…
အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ တံခါးကြီးဖွင့်ထားတာတွေ့ တော့ အမေ နဲ့ အဖေ ခန်းကို ၀င်ဖို့ လုပ်တုန်း အခန်းထဲက အသံကြားမိတယ်…
“ဖေကြီး ရေ သားကတေ့ာ ဘွဲ့ သွားယူပြီတော့…. ကျွန်မ ကတော့ ဘွဲ့ ခန်းမကိုမလိုက်ရလည်း သား နဲ့ အတူတူရှိနေသလို အိကျီ င်္အသ စ်တွေဝတ်ထားတယ်…ရှင့်ကိုလည်း တိုက်ပုံ အသစ်ဝတ်ပေးထား တာတွေ့ လား…”
“တွေ့ ပါတယ် မေကြီးရာ……သားလေးပြန်မလာခင်တော့ ငါတို့ တွေ အိကျီ င်္လဲရမယ်နော်…တော်ကြာ အဖေနဲ့ အမေ က အဖြစ်သည်းတယ်လို့ ပြောနေပါဥိးမယ်ကွာ..ဟားဟားး”
“ဟုတ်ပတော့….သားလေးက ရှင့်ကို စိတ်ပူပြီး ကျူပ်ကို မခေါ်တာတော့…
သူ့ အဖေ တစ်ယောက်ထဲ ဖြစ်နေမယ်တဲ့ …အဲ့ တော့မှ ကျုပ်လည်း ရှင့်ကိုသတိရပြီး နေခဲ့လိုက်တာ….သားလေးသာသတိမပေးရင်
ရှင်တစ်ယောက်ထဲကျန်ခဲ့ မှာသိလား….သားလေကို ရှင်ကျေးဇူးတင်….”
“အေးပါကွာ….အေးပါ…… အင်း ငါတို့ သားလေး ဘွဲ့ ရပညာတတ်ဖြစ်ပြီနော်…”
ထိုစကားတွေ ဟာ ကောင်လေးရင်ကို သံချွန်နဲ့ ထိုးလိုက်သလိုဘဲ…
မခေါ်ချင်လို့ ထားခဲ့တဲ့မိဘ နှစ်ပါးက အပြစ်မမြင်တဲ့ အပြင်အမေ ကငါ့အပြစ်ကို မသိသလိုပါလား…..
“အဖေ နဲ့ အမေ “
“ဟင် ..သား ဘွဲ့ ယူပြီးပြီလား မြန်လိုက်တာ…”
မိဘ နှစ်ပါးမှာ အ၀တ်အစားအသစ်တွေနဲ့ မို့ လို့ မနေတတ်မထိုင်တတ်…
သားလေး မေးလာရင်ဘယ်လို ဖြေရပါ့လဲ လို့ တွေးနေချိန်…
“အဖေနဲ့ အမေ ကို လာခေါ်တာပါ…. ဘွဲ့ ခန်းမ မှာအဖေနဲ့ အမေတို့ အတွက် နေရာရှိသလို….သားရင်ထဲမှာလည်းအမြဲနေရာရှိပါတယ်…သားကို ခွင့်လွှတ်ပါနော်….”
မိဘ နှစ်ပါးရှေ့ မှာ ထိခြင်းငါးပါးနဲ့ ရှိခိုးမိတယ်…
မိဘ နှစ်ပါးကတော့ ၀မ်းသာနဲ့ မျက်ရည်စတွေနဲ့ဆုတွေပေးလို့ …………..
အဲ့ ဒါဟာ သူတို့ အတွက်မဟုတ်ပါဘူး…သူတို့ သားသမီးတွေ အတွက်ပါ…
အ လွမ်း ညည်း သူ
← တောင်ပြိုလက်ဝဲမြို့ ပြန်လည်လက်ခံရေး စခန်းသို့ နေရပ်စွန့်ခွာ မိသားစုဝင်ငါးဦး ပြန်လည် ဝင်ရောက်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူး အခါသမယတွင် ပြောကြားသည့် နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက် စကား အပြည့်အစုံ →